दाँतको बीचमा ग्याप छ ? जान्नुहोस् यस्ता व्यक्तिको स्वभाव – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/दाँतको बीचमा ग्याप छ ? जान्नुहोस् यस्ता व्यक्तिको स्वभाव
काठमाडौँ । समुद्र शास्त्रमा मानिसका विभिन्न अंग र व्यवहारसँग जोडिएका कयौँ कुरा बताइएको छ। शरिरका अंग को सहयोगमा जो कुनै व्यक्तिको स्वभाव भविष्यका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। आज हामी तपाईलाई दाँतको बीचमा ग्याप भएका व्यक्तिको भविष्यवाणीका कारण जानकारी दिदैछौँ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
५) समुद्र शास्त्रका अनुसार दाँतको बीचको भागमा ग्याप हुने व्यक्ति खानाका शौकिन हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिमा विभिन्न प्रकारका भोजन गर्ने निकै इच्छा हुने गर्दछ।६) दाँतको बीचमा ग्याप हुने व्यक्तिको जीवनमा कहिलै पैसाको कमी हुँदैन्। यस्ता व्यक्ति राम्रो फाइनान्स म्यानेजर मानिने गर्दछन् अर्थात हिसाब किताबमा निकै पक्का हुने गर्दछन्।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **